Doorashada Madaxweynaha Hirshabelle ee Jowhar ka dhaceysa OO dib loo dhigay sababtoo-- * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame	 On Sep 10, 2017
Afhayeenka Guddiga doorashada Madaxweynaha Hirshabelle Xildhibaan C/wali Sheekh Cali ayaa ku dhawaaqay in dib u dhac uu ku yimid doorashada.
Waxaa uu sheegay in doorashada oo lagu waday iney dhacdo 12-ka bishan dib loo dhigay illaa 16-ka isla bishan.
“Culeys ayaa ku yimid Guddigii, waxaan dalbanay muddo yar, maadaama musharaxiinta qaarkood ay soo galayaan, waxaa codsanay saddex maalmood iyo hal maalmood oo ah maalinta doorashada”ayuu yiri Afhayeenka Guddiga doorashada.
Waxaa uu sheegay in talo soo jeedintan ay berri u gudbinayaan Baarlamaanka, si ay u ansixiyaan, waxaa uu xusay in waqtiga uu ahaa mid ciriiri ah.
Sideed Musharax ayaa u taagan doorashada Madaxweynaha Hirshabeelle, iyadoo magaalada Jowhar ay ku qulqulayaan Musharaxiinta oo dhamaantood ka soo wada jeeda hal